I-Solar Fusion: Ubuchwepheshe beHuawei bokuguqula amandla elanga | Green Renewables
Amandla elanga axubene nobuchwepheshe obushintshashintshayo ukuze azuze ngokugcwele kuwo. Kulokhu, sizokhuluma ngakho I-Solar Fusion. Kuyisixazululo sesizukulwane esilandelayo esihlakaniphile se-photovoltaic esiqanjwe nguHuawei. Lo mbono wenguquko ugcizelela ubuchwepheshe obukhaliphile nobusha ukuze kuhlinzekwe amazinga alula wokufaka nokuphepha okuphezulu nokusebenza kwesikhathi eside. Inhloso eyinhloko ye-Solar Fusion ukuthi ikhaya lingakwazi ukuzisebenzisa ngo-100%.
Kulesi sihloko sizokutshela konke okudingeka ukwazi mayelana ne-Solar Fusion, izici zayo kanye nezinjongo eziyinhloko.
1 Iyini i-Solar Fusion
2 I-Solar Fusion system yenziwe ngani?
4 Izinzuzo zamandla elanga
Iyini i-Solar Fusion
UHuawei wethule isizukulwane esilandelayo sesizukulwane esilandelayo sesisombululo se-smart photovoltaic "FusionSolar", egcizelela ubuchwepheshe obusha obuhlakaniphile, obuhlinzeka ngamazinga wokufaka alula, ukuphepha okuphezulu nokusebenza kwesikhathi eside, kanye umgomo uwu-100% wokuzisebenzisa ekhaya. Izinhlelo ze-PV zophahla lwezindlu kufanele zihlangabezane nesidingo esikhulayo sokuzisebenzisa. Ngalesi sizathu, izinhlelo ezingcono zokugcina amandla ziyadingeka.
Uhlelo oludizayinelwe abanikazi bezindlu abangochwepheshe nabafaki. Abafaki bezindlu kufanele banikeze abanikazi bezindlu uhlelo lokuzithengela olunamandla nolugxile esikhathini esizayo olugcina ukusebenza kahle okuphezulu, ukuguquguquka nokufaka ngokushesha, futhi lunikeze izixazululo ezihlakaniphile ezihlangabezana nezidingo zabasebenzisi kanye nesevisi yamakhasimende, njengokuxilonga ukude ukwehluleka, ukuze kuzuzwe okwengeziwe. Ukunakekelwa okuhle nokuncane.
I-Huawei ihlanganisa ubuchwepheshe bakamuva bedijithali kanye ne-inthanethi nobuchwepheshe bezindawo zokuhlala zelanga. Lobu buchwepheshe bukunikeza ukwenziwa ngcono kokukhiqizwa kwamandla e-photovoltaic, Isixhumi esibonakalayo sebhethri se-plug-and-play esihlanganisiwe kanye nokuphathwa kwamandla ekhaya okuhlakaniphile.
Ohlelweni olusha lokusebenzisa indawo yokuhlala, amandla e-photovoltaic akhiqizwa ama-solar panel ahlangabezana nesidingo sikagesi wekhaya emini, futhi amandla asele akhiqizwayo asetshenziselwa ukushaja ibhethri bese ekhishwa ukuze ahlangabezane nesidingo esikhulu sikagesi. Isidingo sikagesi ebusuku noma emini. Ngale ndlela, izinhlelo zokuhlala ze-photovoltaic zokuhlala zingafinyelela izinga eliphezulu lokuzidla futhi zandise ukusetshenziswa kwamaphahla ukuze zithole amandla amaningi.
I-Solar Fusion system yenziwe ngani?
Uhlelo luqukethe izingxenye ezilandelayo:
Isikhungo samandla esihlakaniphile: I-inverter esebenza kahle kakhulu, esebenza kahle ngama-98,6%. I-interface ehlanganisiwe yokugcina amandla ingasetshenziswa ngokushesha.
I-Smart photovoltaic battery optimizer: 99,5% ukusebenza kahle. Shiya amaphaneli engeziwe kusilingi ngasinye ukuze uthole ukusebenza okuphezulu kwesistimu. Faka i-rack ngokushesha endaweni yokugcina impahla futhi isikhathi sokufaka ophahleni sizoba sifushane. Ukuqapha okukude.
Uhlelo lokuphatha: finyelela kalula idatha kumadivayisi eselula. Imibiko esebenzayo yemicimbi nama-alamu. Ukuphathwa okumaphakathi kwesistimu yeseli ye-photovoltaic.
Ukuphepha kwamaseli e-photovoltaic: xhumana ne-optimizer nge-MBUS. Isekela amamojula okuqapha nokuphatha ngesikhathi sangempela.
Ibhethri elihlakaniphile le-LUNA2000 lendawo yokuhlala ligqamile kwisixazululo sikaHuawei kulokhu. Ibhethri isebenzisa amabhethri e-lithium iron phosphate ukuthuthukisa ukuphepha. Yamukela umklamo oyimojuli futhi isekela ukunwetshwa kwamandla avumelana nezimo (5-30 kWh). Iphakethe lebhethri ngalinye linesikhuthazi samandla esakhelwe ngaphakathi sokusekela ukushaja okuzimele nokuphathwa kokukhipha.
I-Fusion Solar system inikeza amandla okuzikhethela we-photovoltaic amandla angakhawulela izinkinga zethunzi zokuhlala futhi anike amandla ukusetshenziswa kwezinhlelo ze-photovoltaic ukuze kusetshenziswe ngempumelelo uphahla oluyinkimbinkimbi oluhlangene.
Ngokusho kwenkampani, i-optimizer eklanywe nguHuawei ingakhuphula ukusebenza kahle kwamandla amamojula we-photovoltaic kuze kufike ku-30% kungakhathaliseki umthunzi kanye nesiqondiso sokusebenza kahle okuphansi.
I-Artificial Intelligence Driven Arc Fault Circuit Breaker (AFCI) inciphisa ngenkuthalo ingozi yomlilo ngobuchwepheshe bokuvala ngokushesha, ifinyelela i-voltage engu-zero kusilingi kanye nengozi ye-arc eyiziro, futhi ifinyelela ukuvikelwa kwezendlalelo ezimbili.
Isicelo sohlelo wuphahla lwezindlu zokuhlala. Uhlelo lokuphatha oluhlakaniphile lwe-photovoltaic lunikeza ukuhamba kwamandla kwesikhathi sangempela kanye nokufundwa kwebhalansi yamandla, kanye nokuphathwa kokusebenza kwamaphaneli e-photovoltaic.
Izinketho zokucushwa kwemodi yokulawula zihlanganisa ukuzisebenzisa okuphezulu, ukubeka kuqala ngaphezu kokuphuma kwegridi, isitoreji se-PV esibalulekile, okubalulekile ngaphezu kokujova amandla e-PV engeziwe kugridi. Uhlelo lungacushwa ukuze amakhasimende asebenzisa ngokuzenzakalelayo amandla engeziwe uma intengo iphansi futhi wonge ngokuzenzakalelayo lapho intengo iphezulu.
Ake sibone ukuthi yiziphi izinzuzo zokusebenzisa lolu hlobo lwamandla:
Ingamandla ahlanzekile ngokuphelele asiza ukwehlisa i-carbon footprint kakhulu. Ngenxa yokusetshenziswa kwawo sigwema ukukhiqizwa kwamagesi abamba ukushisa futhi asingcolisi phakathi nesizukulwane sawo noma phakathi nokusetshenziswa kwawo. Kukhona ukungcola okuncane kuphela lapho udala ama-solar panel.
Kungumthombo wamandla ovuselelekayo futhi osimeme ngokuhamba kwesikhathi.
Ngokungafani namanye amandla avuselelekayo, la mandla angakwazi ukushisa izinto.
Ayidingi noma yiluphi uhlobo lokukhishwa njalo kwezinto ukuze isebenze. Lokhu kwenza kube amandla angabizi kakhulu okutshalwa kwawo kokuqala kulula ukukuthola ngokuhamba kweminyaka. Kuyiqiniso ukuthi enye yezinkinga eziyinhloko amandla avuselelekayo abenayo kusukela ekuqaleni kwakuyi-investimenti yokuqala kanye nezinga layo lokubuyisela, nakuba lokhu akusekho ngenxa yokuthuthukiswa kobuchwepheshe. Iphaneli yelanga ingaba nempilo ephelele yeminyaka engama-40.
Ukukhanya kwelanga kuningi kakhulu futhi kuyatholakala ngakho ukusebenzisa ama-solar panel kuyindlela esebenzayo. Cishe noma iyiphi indawo emhlabeni ingasebenzisa amandla elanga. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi enye yezinzuzo ezinkulu zamandla elanga ukuthi ayidingi i-wiring. Lokhu kusiza ukufakwa ezindaweni lapho kunzima khona ukufaka i-wiring enjalo.
Enye inzuzo yamandla elanga ukuthi anciphisa isidingo sokusebenzisa amafutha emvelo, ngaleyo ndlela asize ukulondoloza imithombo yemvelo nokunciphisa ukungcoliswa kwemvelo.
Ngithemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana ne-Solar Fusion nezici zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Amandla avuselelekayo » Photovoltaic Solar Amandla » I-Solar Fusion